ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း-ရေး(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း MNP ပါတီ > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း-ရေး(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း MNP ပါတီ
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 1, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 353 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ > ချစ်မင်းထွန်း
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ-ကျွန်တော် ၁၉၉၀ ကတည်းက ရေးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှာ ကျွန်တော် အရွေးချယ် ခံခဲ့တယ်။အနိုင်ရ
တယ်။အနိုင်ရပြီးတော့ ပုဒ်မ (၅-ည)နဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီက အရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများ ဖမ်းဆီးအထိန်းအသိမ်းခံခဲ့ရ တယ်။အဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါခဲ့တယ်ပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတယ်။၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျွန်တော်တို့က သဘောမကျဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ဟိုတုန်းက မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ MNDF ဟာ CRPP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ ၂၀၁၀ မှာ (CRPP)အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံး အရွေးမခံခဲ့ဘူး။ တောင်းဆိုမှုတော့ ပြုခဲ့ကြတယ်။ အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးဖို့အတွက် တင်းကြပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့အနေအထားတွေကို လျှော့ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆို ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဒီလိုဘဲ အရွေးချယ်ခံဖို့ မဝင်ခဲ့ဘူး။
အခု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြတော့ ကျွန်တော်တို့ သဘောမကျဖြစ်နေတဲ့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြင်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ တွက်ထားတယ်။အဓိကတော့ ပါတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဘဲ။ ပါတီရပ်တည်ဖို့က အနည်းဆုံး (၃)နေရာ အရွေးချယ်ခံရမယ် သုံးနေရာ အရွေး မခံရင် ပါတီပျက်ဖို့ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရွေးချယ်ရင်လည်း အပြီးဖြတ်ရွေးလိုက်တော့ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ လည်း အရွေးချယ်ခံဖို့ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်တော်အနေနဲ့က နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံလည်း အတော်ရလာတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပါတီရဲ့မူဝါဒဘောင်အတွင်းမှာပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီနှစ်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ ခင်ဗျာ။
မေး-အခုလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းက မွန်လူမျိုးတွေ၊ မွန်ပြည်နယ်သား အတွက် ဘာတွေ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော်အနေအထားက ပြည်ပ နိုင်ငံတော်တော်များများကို ဒီကြားတယ်မှာ ရောက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံရော၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ နော်ဝေး၊ ဂျာမနီ၊ နောက်တစ်ခုက အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ အားလုံးလိုလို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါ ကျတော့ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အများကြီးကို အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေတယ်။
ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာ ဆန်စားလို့ အကောင်းဆုံးက အိန္ဒိယဖြစ် နေတယ်။ ဒေးဟာပြည်နယ်နဲ့အူတာပြည်နယ် ၂ ခုလောက်ဘဲ ရောက်ပါတယ်။အဲ့ ဒီနယ်တွေမှာ ဆိုရင် မိုးရေချိန် လက်မ (၆၀)၊(၇၀)လောက်ဘဲရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လယ်သမားတွေကို ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ဖို့အတွက် လယ်သမားတွေ စပါးစိုက်နိုင်ဖို့အတွက် ရေတင်ထားပေး တယ်။ သူတို့တွေက တစ်နှစ်မှာ နှစ်သီး သုံးသီး စိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရွာ ရေးမြို့နယ် ကောဒွတ်ကျေးရွာမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လယ်တွေက တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါဘဲ စိုက်နိုင် တယ်။ နောက် ထွက်နှုန်းကလည်း ယိုးဒယားထက်စာရင် အများကြီး နိမ့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သုံးဆယ်နဲ့ငါးဆယ်ကြားဘဲ ထွက်တယ်။ယိုးဒယားများ တစ်ရာကျော်နဲ့နှစ်ရာ ကြားထွက်တယ်။
ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒက ကျွန်တော်မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူတွေကိုတောင်မှ နားလည် အောင် မနည်းရှင်းပြရမယ့် အခြေအနေမှာ ရှိတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာဘာ ထွက်တာ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း ပတ်ဝန်းကျင်တော့ ရှိတယ်။ အခုတောင် ဈေးက ကျနေ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုန်ကြမ်းတွေဘဲ ထုတ်ရောင်းနေရတယ်။ထုတ်ရောင်း လို့ ဈေးက ကျနေတဲ့အခါကျတော့ လူတွေ စီးပွားပျက်တာပေါ့နော်။
နောက် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ပြန်ကြည့်ပြန်တော့လည်း ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လယ်အနေ အထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ လယ်အနေအထားနဲ့မတူဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ချင်တာက အဓိက လူတန်းစားတွေပေါ့နော်။သမ္မတကြီးပြောသလိုဘဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ပါးရေးဆိုတဲ့ အစီစဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်က မွန်ပြည်နယ်သားနဲ့မွန်ဒေသတွေမှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းက တောင်သူ လယ်သမားဖြစ်နေတယ်။သူတို့က စပါးစိုက်မယ် ရာဘာစိုက်မယ်။ ကွမ်း၊ ကွမ်းသီး စိုက်မယ်။ ဒူးရင်းသီး စိုက်မယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော်သာ တကယ်လို့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုရင် ဘယ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြေတောင် မြှောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတယ်။
အခုလို ကျွန်တော် ခေါင်းထဲမှာ စွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ အခုဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကို ကုန်ကြမ်း အဖြစ် ရှိနေတဲ့ ရာဘာတွေကို ကုန်ချောအနေနဲ့ထုတ်မယ်။ ရာဘာက အနည်းနဲ့အများကတော့ ဈေး ကောင်းပိုရလာမယ်။ကျွန်တော် မြို့နယ် လူတန်းစားတွေကို တော့ အဓိကမထားဘူး အဓိကထားချင် တာက အများစု တောင်သူလယ်သမားတွေက လူလတ် တန်းစားဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဝင်းစားတယ်။ အဲ့ဒါကို ဘာများ လုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ကျွန် တော်ရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့စဉ်းစားမိပြီးတော့ ဒါတွေကို လုပ်ပေးချင်တယ်။
မေး-တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရပြီးဆိုပါက တကယ်ဘဲ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား။
ဖြေ-ကျွန်တော် လုပ်ပေးချင်တဲ့ အထဲမှာ လယ်ယာ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သုတေသနလုပ်ချင်တယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်အရွေးချယ်ခံရလို့ (၅)နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ သုတေသန လုပ်မယ်။
သုတေသနကို နိုင်ငံတော်ကကော ကျွန်တော်တို့ နယ်မှာ အဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ အာဏာပိုင်တွေကော စိတ်မဝင်စားဘူး၊ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ လယ်ယာမြေဟာ အခြားဒေသကလယ်မြေတွေနဲ့ မတူဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့ မြေက ဘယ်လို အနေအထားရှိလဲ သိအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။မြေကြီးကို ယူပြီးတော့ ဘယ်လိုမြေကြီးလဲ အဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့မြေသြဇာကို ဘယ်လိုသံးမ လဲ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ နောက် ရေမြေ သဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မျိုးစပါးတွေ ထွန်းကားနိုင် ဖို့ရယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ရာဘာလည်း အဲ့လိုဘဲ။ရာဘာက အခု ကုန်ကြမ်းကို ရောင်းတာထက် စာရင် ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရင် ပိုပြီးတော့ အကျိုးရှိမယ်။ ထို့အတူဘဲ မွန် ပြည်နယ်မှာ ဒူးရင်း၊သရက်၊မင်းဂွတ်၊ ဒါတွေ တအားထွက်ပါတယ် ။အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် က ဆီသွပ်ဘူးလို လုပ်ငန်းမျိုးတွေ လုပ်ပေးချင်တယ်။ လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန် တော်တို့ ဒီအနေအထားက ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ (၅)နှစ်တာမှာ အကောင်အထည်လုံးလုံး မဖော်နိုင်ရင်တောင်မှ အစပျိုးသွားစေချင်တယ်။
မေး-အခု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေ လိုအပ် နေတယ်လို့ အစ်ကိုယ့်အနေနဲ့ မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ-အဓိကတော့ လယ်သမားတွေ လူလတ်တန်းစား နေရာကို ရောက်ရှိဖို့ လိုအပ်နေ တယ်။ တောင်သူလယ်သမားတွေက အခု စပါးဈေး ဒီနှစ်ကောင်းနေတယ်။ဒါကလည်း တိုင်းနဲ့ ပြည် နယ် ၁၄ ခုထဲက ၁၂ ခုလောက်က သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့အတွက် စပါးတွေ ဆုံး ရှုံးကုန်တဲ့အတွက် ဒီဘက်မှာ စပါးဈေးကောင်းတာပေါ့။
အခု ကျွန်တော် အရွေးချယ်ခံမယ့် နေရာက ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ TOYO TThai ကုမ္ပဏီ က မဂ္ဂါဝပ် ၁၂၈၀ ထွက်တဲ့စက်ရုံကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ MoU ကနေ MoA လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်သဘောတူညီမှုအဆင့်တွေ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသွားပြီ။ အဲ့ဒါကြီးက နောက်ဖြစ် ၏လာမယ့် ဘေးထွက် ပြဿနာတွေက အများကြီးဘဲ။
လယ်သမားတွေ စပါးဈေးကောင်းမွန်နိုင်ဖို့ လိုအပ်သလို စပါးစိုက်ပျိုးမှု အောင်မြင်ဖို့လည်း လို အပ်တယ်။နောက်တစ်ခုက ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ ထူထောင်တဲ့အခါကျရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ဒေသခံတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါကို ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားသွားပါ့မယ်။လုပ်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထား ပါတယ်။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ် ယောက် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ပေး သွား မယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ ခင်ဗျာ။
အဖြေ ။ ။ လယ်သမားတွေအတွက် ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ပေးသွးမယ်။ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ရင်ဆိုင်လာရမယ့် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ပြဿနာပေါ့ဗျာ။ ဒီကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကြီးက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ထူထောင်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ထူထောင် တဲ့အခါကျရင် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ကြိုသိနေတယ်။ကျောက်မီးသွေးက ထုတ်လာမယ့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေက လူကို ဘယ်လောက် အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုပေါ့။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အရွေးချယ်ခံရရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အထဲကနေ ပြည်သူတွေကို လက်တွေ့ မှာ သာမန်အနေအထားကနေ ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဖို့ အရမ်းစိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတော်က အခု ဥပဒေပြု ဇယား(၂)နဲ့ ဥပဒေပြု ဇယား(၅)မှာ ပြည်နယ် လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေကို ပြဌာန်းထားတဲ့အခါမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ညှိပြီးတော့မှပြည်နယ်အစိုးရတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာပါလာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါက လယ်သမားတွေ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးမှုကို အောင်မြင်အောင် စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင် ပေးသွားဖို့ အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို လူလတ် တန်းစား အဖြစ် ရောက်အောင် မြှင့်တင်ပေးဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်။
မေး-နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေထဲကနေ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်ပေး သွားဖို့ရှိပါသလဲ။
အဖြေ ။ ။ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေ လုပ် လို့ ရတဲ့ အတိုင်းအတာထဲကနေ ရသလောက် လုပ်သွားမယ်။အခု ကျွန်တော် မော်လမြိုင်မှာရှိပါ တယ်။မော်လမြိုင်မှာ ဟိုတုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေတဲ့ ရွာတွေ ရေးဘက်ခြမ်းကလူတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ မိုင်(၈၀)၊(၉၀)ဝေးပါတယ်။ကောင်းတဲ့ အားသာချက်ကတော့ အဲ့ဒီက ရှိတဲ့လူနာ တွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ နေ့ချင်းပြန် ဆေးကုသနိုင်တယ်။ဓါတ်မှန်တောင် ရိုက်သွားနိုင်တယ်။ ပြီးရင် ပြန်သွားလို့ရတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက တော်တော်လေးကို ကောင်းလာတယ်။ ဒါ ကတော့ ကောင်းမွန်လာတဲ့ရလဒ်ပါ။ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ လုံလောက်ပြီးလို့ ကျွန်တော် မယူဆပါဘူး။
ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးရမယ့် အနေအထားတွေရှိပါတယ်။တယ်လီဖုန်း ပြဿနာ ရှိ သေးတယ်။လမ်းထဲမှာ ပြတ်တောက် ပြတ်တောက်လေးတွေပေါ့။နောက် အင်တာနက်လည်း ဟုတ် တိ ပတ်တိတော့ မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ တိုးတက်လာတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။မီးကလည်း အရင် ကထက်စာရင် မော်လမြိုင်မှာ မီးက ပိုမှန်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရွာတွေ အားလုံး လိုလိုမှာ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထနဲ့လုပ်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မော်လမြိုင် မှာ တစ်ယူနစ် အသုံးချရင် ၃၅ ကျပ်ဘဲ ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရေးမြို့နယ်ထဲ မှာဆိုရင် တစ်ယူနစ်ကို ကာလပေါက်ဈေး ဒီဆယ် တစ်ပုလင်းဖိုးပေးရပါတယ်။ကြမ်းပျှမ်းပြောရရင် တစ်ယူနစ် ၆၀ဝ ကျပ် ပတ်ဝန်းကျင်ပေးနေရပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ စဉ်း စားမိပါတယ်။
အခု မော်လမြိုင်မှာ ကျွန်တော်တို့ မီးပေးတဲ့ စက် လေးလုံး ထူထောင်ထားပါတယ်။အဲ့စက်လေးလုံး ထူထောင်တဲ့နေရာမှာ အားလုံးပေါင်း မဂ္ဂဝပ် (၂၃၀)ထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ မဂ္ဂါဝပ်ထဲက မဂ္ဂါဝပ် (၈၀)လောက်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်ကို ပြန့်ဖြူးပြီးတော့ ကျန်တဲ့ မဂ္ဂါဝပ် တွေကို သူတို့ရဲ ့မဟာဓါတ်အားလိုင်းထဲ ထည့်ရပါတယ်။ မဟာဓါတ်အားလိုင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ အခါ ကျတော့ နယ်တွေကို မီးမပေးနိုင်ဘူး။မော်လမြိုင်က ထုတ်တဲ့ မီးက မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်စပ်ရာ ဒေသပေါ့။ ကရင်တို့ တနင်္သာရီတို့ စသဖြင့်ပေါ့ မီးရရှိရေးက အရေးကြီးပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် မီးခလုတ် တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရင် မီးလင်းနေရမယ်။ရေခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင် ရေလာနေရမယ်။ဒါက ကျွန်တော်တို့အတွက် အဓိက စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒါတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဘောင်အတွင်းမှာ ကျွန်တော် ကြိုး စား လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ။
မေး-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကော ဘာတွေ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစား ထားပါသလဲ။
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့ပါတီ နာမည်က မွန်အမျိုးသားပါတီဖြစ်တယ်။မွန်လူမျိုးတွေ အတွက် ဆိုရင် အဓိကတော့ စာပေယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုသုတတွေ ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဆိုရင် သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပေါ့။အဲ့ဒီနားက ပတ်ဝန်းကျင်းမှာ ရှေ့ဟောင်းတူးဖော်မှု ငွေ သိန်း ၂၀ဝ ချပေးတယ်။ငွေသိန်း ၂၀ဝ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ငါးကန် တစ်ကန်တူးလို့မရတဲ့ ငွေ အမောက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါက မစို့မပို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့် ဆက်တူးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလို ရှေ့ဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်က ကျွန်တော်တို့ မျုးိဆက်က အရေးကြီးပါတယ်။ဒါက ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက် အရေးကြီးရုံတင်မကပါဘူး ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံ၊ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်တွေဟာ ထိုင်းနဲ့နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်တဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်
ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များကို စည်းရုံးနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလာမှု လုပ်ငနး်တွေကနေလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်အတွက် ငွေရေး ကြေးရေး ရဖို့အစီစဉ်ရှိပါတယ်။
ကဗျာဝကျေးရွာတို့ ကျွန်တော်တို့ ရွာနောက်က ကုလားဂုတ်ကျွန်းတို့ စသဖြင့် ဒီကျွန်းတွေကို နိုင်ငံ ခြားသားတွေ သဘောကျလာအောင် ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးလာမယ်။နောက်တခြားနိုင်ငံမှာ အလုပ် သွားလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကို မျှော်ကိုးထားပါ တယ်။ ဒီမှာ အလုပ်အကိုင်မရှိလို့ သူများ နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့အခါကျတော့ ရတဲ့ ဈေးနဲ့ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုးလုပ်နေရတာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မမြင်ရက်ပါဘူး။
သူတို့ကို ဒီမှာ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ရှိရင် သူတို့လည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ပြန်လာ ပါ လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ ဘီလူးကျွန်းရှိပါတယ်။ချောင်းဆုံက ဟိုတုန်းက စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်း မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ရွာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ ချောင်းဆုံက ထုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မူပိုင် ခွင့်မရှိတာတို့ ဒါတွေကို မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ချောင်းဆုံရဲ့ တိုးတက်လာနိုင်တဲ့ အရာတွေက ပျောက်ပျက်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်လေးဟာ နေချင် သ ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သလို ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ပြည်နယ်အဖြစ်လည်း ရပ် တည်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး-မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ပါတီက စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို မွန်တွေက ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီး ပိုင်ခွင့်ရအောင် ပါတီရဲ့ မူအတိုင်းလျှောက်လှမ်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဝါသနာ ကတော့ ခဏပြောခဲ့သလိုဘဲ သုတေသနကိစ္စကို ပြည်သူတွေ သဘောပေါက်အောင် တော်တော် လေး ရှင်းပြ ယူရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံးက ဒါကို စိတ်ဝင်စားစေချင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျွန်တော် အရွေးချယ်ခံရတဲ့ (၅)နှစ်မှာ သုတေသနလုပ်ပြီးတော့ ရာဘာဈေးကွက်၊ ကွမ်းသီးဈေးကွက်၊စပါးဈေးကွက်များကို သေသေချာချာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စိတ်ကူး ထားပါတယ်။နောက်ထူးခြားတာက ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်မှာ အန္တရာယ် ကျရောက်စေမယ့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို ကျွန်တော်လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။
အခု ကျွန်တော် ကြိုပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူကလည်းဘဲ ဒီစက်ရုံကြီးကို လက်မခံဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုပြီးတော့ ဘဝင်မကျဘူး၊ ဒီစက်ရုံကြီးက ရေရှည်မှာ ဒါကြီးက အကြီးအကျယ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒါကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေး သွား ဖို့လည်း ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
အမည် – ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း(ခ)နာဲစောန်တမး
အလုပ်အကိုင် – ပြင်ပ အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးခန်း၊ ဆရာဝန်၊
ပညာအရည်အချင်း – ၁၉၇၇ တွင် မုဒုံ အ.ထ.က(၁) ၁၀ တန်း (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် မြန်မာနိ်ုင်ငံတဝန်းပထမဆုရရှိ၊ M.B.B.S။
မွေးသက္ကရာဇ် – ၃၁.၈.၁၉၅၇
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၀/မလမ(နိုင်)ဝ၂၈၇၆၆
လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာ – အမှတ် ၆၂၇၊အောက်လမ်းမကြီး၊ဘိုကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊
အဖအမည် – နိုင်သာထင်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ် – ရေးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေ
ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် – ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကျွန်တော်က မွန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဗမာလို မပြောတတ်တဲ့ မွန်ရွာ(ကော့ဒွတ်၊ ရေးမြို့နယ်) မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ရွာမှာမူလတန်းအောင်ပြီးနောက် မုဒုံမှာ ၁၀ တန်း အောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) မှာ ပညာဆည်းပူးရင်း တက္ကသိုလ်များ(ရန်ကုန်)မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် (၅)နှစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ် မွန်အမျိုးသားနေ့ကျင်းပရေးကော်တီ အတွင်းရေးမှူး၊ မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌအဖြစ် ၃ ကြိမ်၊ မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ချစ်မင်းထွန်း 2015-09-01
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ချစ်မင်းထွန်း
Previous မွန်အမျိုးသားအကျိုးသယ်ပိုးမည့်ပါတီကို ထောက်ခံမဲပေးရန် NMSP တိုက်တွန်း
Next AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)